दुधकुण्ड पिके अल्ट्रा म्याराथुन प्रतियोगीता हुँदै ! – Sagarmatha Online News Portal
दुधकुण्ड पिके अल्ट्रा म्याराथुन प्रतियोगीता हुँदै !
सोलुखुम्बु । भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्षित गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धन तथा महिला शसक्तिकरणका लागि दुधकुण्ड पिके अल्ट्रा म्याराथुन हुने भएको छ ।
द स्मल वल्र्ड (टिएसडब्लु) र पाचौ पटकसम्म ओलम्पिक अथ्लेटीकमा नेपालबाट भाग लिई सैयौं दौड प्रतियोगिता जित्न सफल दाछिरी दावा शेर्पाको आयोजनामा यहि माघ २४ मा हुने म्याराथुन दुई रुटमा चल्नेछ । पुरुष धावकका लागि फाप्लु–पिके–जुनवेशी हुदै टाक्सिन्दु र महिला धावकका लागि फाप्लु–जुनवेशी–टाक्सिन्दुको रुट तय गरिएको छ ।
धावक दा छिरी शेर्पाले नेतृत्व गर्ने म्याराथुनमा प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुनेलाई नगद २० हजार, १० हजार र ५ हजार पुरस्कार प्रदान गर्ने टिएसडब्लुका अध्यक्ष कर्मा शेर्पाले बताए । प्रथम र द्धितिय हुनेलाई दा छिरी दावा शेर्पाको नेतृत्वमा सेप्टेम्बरमा डोल्पामा हुने डोल्पा ट्रेल रेस र अक्टोबरमा हुने सोलुखुम्बु ट्रेल रेसमा निशुल्क रुपमा सहभागी गराईने छ ।
खुला प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने म्याराथुनमा सहभागी बन्न चाहने महिलारपुरुष धावकले रजिष्ट्रेशन शुल्क ५ सय बुझाउनुपर्ने छ भने धावकलाई म्याराथुन टिर्सटको व्यवस्था आयोजकले गर्नेछ । म्याराथुनमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र माछापुच्छ्रे बैँक, सल्लेरी शाखाले प्रायोजन गरको छ ।
नाम दर्ताका लागि सम्पर्क
सल्लेरीका लागि उत्रमान राई ९८४२८६८०२४
टाक्सिन्दुका लागि फु छिरिङ शेर्पा ९८६९७२३१२३
हिमाल एफ.एम. सल्लेरी ०३८५२०४५१
काठ्माडौका लागि फुर्वा शेर्पा ९८४५५०२०६६
Published On: १८ माघ २०७६, शनिबार